Madasha Xisbiyada Qaran oo cadeeyay mowqifkooda hadalkii Xaliimo Yareey – Radio Baidoa
Madasha Xisbiyada Qaran oo cadeeyay mowqifkooda hadalkii Xaliimo Yareey
By Webmaster	 On Jun 28, 2020
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa soo saaray Warsaxaafadeed ay ku sheegeen inay kaga walaacsan yihiin hadalkii jeedintii Guddiga Doorashooyinka madaxa banaan ee Soomaaliya ay ku sheegtay 2 hab doorasho,iyaga oo sheegay in aysan aqbali doonin muddo kororsi ay sameeyaan Golayaasha dawladda.
War-saxaafadka madasha Xisbiyada lagu soo qaadin Go’aankii baarlamaanka Soomaaliya ay Gobolka Banaadir ugu ansixiyeen in uu matalaad ku yeesho Aqalka Sare,hayeeshee waxaa Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka loogu baaqay inay dhamaantood is casilaan.
Qoraalka, madasha laguma soo qaadin arrinta Mataalada Muqdisho, oo ah mid ay ku kala qeybsan yihiin mucaaradka DF oo ay ku jiraan dawlad gobaleedyada, iyadoo ay muuqata gudaha khilaafka ah.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud oo kamid ah hoggaanka Madasha Xisbiyaa ayaa soo dhaweeyey 13 Senator ee loogu daray Muqdisho Aqalka Sare,hayeeshee uu muddo kororsi ku tilmaamay hadalkii Xaliimo yareey.
Beesha Caalamka ayaa sidoo kale soo dhaweysay hadaljeedintii Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka waxayna uga mahadceliyeen in ay keentay labo nooc oo doorasho.
QM oo ka hadashay hadalkii Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka
Maxkamadda Ciidamada oo Maanta la horkeenay laba Eedeysane